'Sifuna ukukhipha wonke amandla esinawo' | Isolezwe
'Sifuna ukukhipha wonke amandla esinawo'
ezemidlalo / 8 February 2019, 4:33pm / zakhele xaba
INJINI yeKaizer Chiefs, uGeorge “Mido” Maluleka (osesithombeni), ikholwa ukuthi uma bengazinikela ngokuphindiwe, banciphise amaphutha bangakuqeda ukucanasa kwe-Orlando Pirates emdlalweni wabakhaya baseSoweto.
IChiefs izobhekana nePirates emdlalweni we-Absa Premiership eFNB Stadium, eNasrec, kusasa ngo 3.30 ntambama. Emidlalweni emithathu eyedlule phakathi kwala maqembu, iPirates iyiwinile.
Kule midlalo kukhona noweTelkom Knockout obukade useThekwini. Cishe kuyona yomibili imidlalo yabakhaya kule sizini, iChiefs yenzelwe phansi amaphutha enziwe wudonga.
Ngaphezu kwalokho, Amakhosi asehlulwe kabili emidlalweni yeligi yiMamelodi Sundowns neCape Town City ngenxa yamaphutha kanozinti uVirgil Vries. Lokhu kufaka ingebhe kubalandeli baMakhosi.
UMaluleka uthe kuzofanele bashintshe ukwenza uma bezimisele ukuphuma bephethe okuthize ngempelasonto.
“Siwulungele umdlalo. Kufanele uhlale uzinikele ngokuphelele emidlalweni yalolu hlobo. Unciphise amaphutha, ukhiphe lonke ikhono onalo. U-120% awanele kule midlalo. Thina singabadlali, siya kule midlalo sifuna ukukhipha wonke amandla esinawo, singafuni ukuphoxa abalandeli, imindeni yethu. Kuzoba wumdlalo onzima kodwa ngicabanga ukuthi siwulungele ngokuphelele,” kusho uMaluleka.
Akubuzwa ukuthi iPirates izodlala lo mdlalo inokuzethemba ngaphezu kweChiefs ngenxa yemiphumela yakamuva phakathi kwalezi zinkunzi.
“Okwamanje iPirates idlala imidlalo eminingi. Bathola amava sonke isikhathi. KwiCAF (Champions League) amaqembu ebhekana nawo aletha okuhlukile okwenza bahlomule nangokomqondo. Sonke siyazi ukuthi kwenzekani emidlalweni yeCAF. Ngokomqondo ngeke ngisho ukuthi bangaphezu kwethu kodwa kuyinto esiyiqaphele. Kufanele senze isiqiniseko sokuthi siyafinyelela ezingeni labo ngokomqondo.”
Kusukela kufike umqeqeshi u-Ernst Middendorp, iChiefs ikhombisa ukuvuka emaqandeni. Ibhola elidlalayo lihluke kakhulu kunalelo ebilidlala ekuqaleni kwesizini.
Ngaphambi komdlalo wabakhaya weligi, kusuke umsindo iphini lomqeqeshi wePirates, uRulani Mokwena, ethi kulele kunye ebhentshini laMakhosi. Kulokhu eZimnyama zizobhekana nobuchule bukaMiddendorp.